Kedu ka Teknụzụ si emetụta ebe anyị na-eri nri | Martech Zone
Anyị na-akọrọ a post on Ntughari, usoro iguzosi ike n'ihe na ụgwọ ọrụ maka ụlọ ahịa kọfị na ụlọ nri ndị na-enyere aka ịchụpụ ndị ahịa. Nhazi ịntanetị, ndoputa ịntanetị, nyocha intaneti, mgbasa ozi mmekọrịta, akwụkwọ ikike dijitalụ, nyocha mpaghara… teknụzụ na-enwe mmetụta dị ukwuu na otu anyị si achọta na ebe a na-agakarị.
N'ezie, National Restaurant Association na-akọ na 45% nke ndi ahia ahọrọla ebe ị ga-eri ihe na ntanetị. Na 57% nke ndị nlekọta jiri nyocha dị na ntanetị iji nyere ha aka ikpebi ebe ị ga-eri nri ọzọ! Nkà na ụzụ ga-anọgide na-emetụta ụlọ ọrụ a n'ọdịnihu - site na ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị na ịhazi onwe gị iji mbadamba nkume ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. N'oge okpomọkụ ikpeazụ ha mepụtara ihe omuma a iji nye ụfọdụ nghọta:
Tags: otu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ mbanraNyocha banyere ntanetịụlọ oriri na ọ reviewsụ reviewsụ reviewsteknụzụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụụlọ oriri na ọṅụṅụ